QM oo soo dhoweysay go’aan uu DENI Muqdisho ku tegayo | Xaysimo
Home War QM oo soo dhoweysay go’aan uu DENI Muqdisho ku tegayo
QM oo soo dhoweysay go’aan uu DENI Muqdisho ku tegayo
Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa amaantay oo soo dhaweeyey go’aanka uu madaxweynaha Puntland Saciid Deni ku qaatay inuu ku yimaado Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya.
QM ayaa sidoo kale xustay inay ka war sugeyso natiijada kasoo bixi doonto kulanka la filayo inay yeeshaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Puntland Saciid Deni, si loo sii horumariyo wadahadalada ku dhisan danta guud.
Hadalka kasoo yeeray Qaramada Midoobay ayaa kusoo aadayo xilli xubnihii ka koobnaa Xildhibanada iyo Wasiirada ee ka socday Dowladda Soomaaliya iyo madaxweynaha Puntland Saciid Deni ay ku heshiiyeen inuu yimaado Muqdisho si uu ula kulmo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Wasiiro ka tirsan Puntland oo maanta la hadlay qaar kamid ah warbaahinta ayaa si kastaba sheegay in Madaxweyne Deni uusan Muqdisho u tagayn wadahadal uu la galo madaxda Federaalka, balse uu tagayo u gogol xaarka shirka ay Puntland ugu baaqday dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada.
Dani oo Madaxweynaha Puntland loo doortay 8 January sanadkii 2019, waxaana mudadii ka dambeysay doorashadiisa uusan imaan Magaaladda Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya, waxaana jiray khilaaf xoogan oo kala dhexeeyay Dowladda Faderaalka Soomaaliya.